shankalay13: February 2010
အော်.. ဟုတ်လား.. ဘယ်သူလဲကွာ ?
အူဝဲအော်ရင်း လူ့ ဘ၀ရောက်
အနာဂတ်မှာ စိတ်ချမ်းသာဖို့ 
အော်... 24နှစ် ကျော်သွားပါလား။
၀မ်းဗိုက်ဖြည့်ဖို့လှုပ်ရင်းကိုင်ရင်း
အခက်အခဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ .....
နှလုံးသားမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ 
နောက်ဆုံးမှာတော့ မင်းနဲ့ တွေ့ ပြီး
ဘ၀ဒဏ်ကို ကြံ့ ကြံ့ ခံရင်း
ခုချိန်မှာသာ ငါ့ဘ၀ရဲ့ 
ဘယ်သူ့ ရင်ခွင် နောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်
အမှာစကား ဘယ်သူ့ ကိုများ
နောက်ဆုံးအဖြစ် ဘာတွေလုပ်လို့ 
အတွေးများနဲ့တ၀ဲလည်လည်
မချိတင်ကဲ ကြောက်ရွှံ့ စွာနဲ့ 
၀မ်းနည်းခြင်း လဲပေးတတ်လို့ 
ခန့် မှန်းလို့မရသေးပါလား။
ချစ်ခြင်းကို တွေ့ ပြီးသွားတိုင်း
လူတိုင်းက ပျော်ရွှင်လို့ 
မသိကျိုးကျွံ ခေါင်းကိုငုံ့ ကာ
ငါ့ရှေ့ ကဖြတ်တိုင်း မင်းလုပ်တတ်တယ်။
တွန်းပါများရင် ရွှေ့ မယ်ဆိုတဲ့
နည်းနည်းရွှေ့ လဲ ကျေနပ်မှာပါ။
မျှော်လင့်ချက်လေး မေးခွန်းတွေနဲ့ 
မူးယစ်ခြင်းနဲ့မင်းအချစ်မှာ
နေ့ တိုင်းရက်ဆက် ငါဆက်တိုက်နေမယ်။
စတွေ့ ချိန်ခါ ချစ်ခြင်းယိုဖိတ်
ကံမကောင်းတော့ မင်းနဲ့ ရင်းနှီး
ချစ်ကြောင်းရေးရာ ပြောဖို့ ကလဲ
ပြုံးရွှင်ကြည်နူး တို့ ဘ၀ဟာ
ရင်ကအက်ကွဲ ဆွေးမိခဲ့လို့ 
အပြုံးကိုဆောင် ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ 
တစ်နေ့ နေ့ တော့ ဒီဆူးပင်မှာ
လေပြေ ( မုန်တိုင်းရေ ပျော်စရာ ကဗျာရေးမလို့ ပဲ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပဲ ထွက်လာတယ်လေ။ ရှမ်းကလေးကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့ ဗျာ။ ကျနော့်အပြစ်ပါ)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 11:50 AM No comments:
မနေ့ ကတွေ့ ခဲ့တဲ့ကောင်မလေး
သက်သေထူလို့ငါမမှုတော့ဘူး။
ရေစက်ဆုံလို့ ငါတို့ တွေ့ တာဖြစ်မှာ..
ဘုရားသခင်က ငါ့ကိုမင်းနဲ့ တွေ့ အောင်
Posted by Shankalay or Sai Sai at 11:42 AM No comments:
အချစ်ဆိုတာ အဖြေပေါ်လို့ 
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:49 AM No comments:
အလှည့်ကြ ပေးတဲ့ရေကို တန်းစီပြီးခပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ရေပုံးတွေကို သိမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မနက်စာဖြစ်တဲ့ ထမင်းကြော်နဲ့အကြော် တစ်ခုကို လျင်မြန်စွာစား... ပန်းကန်ဆေးပြီးတာနှင့် အပေါ်ထပ်ကိုတက်ကာ ကျောင်းစိမ်းလဲဝတ်လိုက်သည်။
ပြီးလျှင် လိုသည်ထင်သောစာအုပ်များကို လွယ်အိတ်ထဲထိုးထည့်ကာ.. ကျောင်းသို့ သုတ်ခြေတင်ရန် ပြင်ဆင်ခိုက်.. အဒေါ်က
"မျက်နှာ ဒီလောက် အဆီတွေပျံနေတာ.. သနပ်ခါးလေး.. ပါလေး လိမ်းသွားအုန်းလေ."
“ရပြီ မလိမ်းတော့ဘူး.. ဘယ်သူမှလဲကြည့်မှာ မဟုတ်ဘူး”
ဆိုကာ ကျောင်းသို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ ကျောင်းနဲ့အိမ်က ၂၀-၂၅ မိနစ်လောက် လျှောက်ရတယ်။ ဒီနေ့ က ကျောင်းစဖွင့်တဲ့နေ့ ။ ကျနော်ကအခုဆို ရင်ဆယ်တန်းရောက်ပြီ။
ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် “ဆယ်တန်း ” ဆိုတာကို ကြားတာနဲ့လန့် သလိုလိုဖြစ်နေတာ။ ဖြစ်လဲ ဖြစ်စရာပဲလေ.. ဆယ်တန်း ကျတို့ ၊ ဆယ်တန်းစာက ခက်လိုက်တာတို့ က နားမဆန့် အောင် ကြားနေရတာကိုး။
“သူက ဆယ်တန်းကို မိန်းမရပြီးတော့မှ အောင်တာ၊ သူ့ သမီးနဲ့သူက ဆယ်တန်းအတူတူအောင်တာလေ” ဆိုတာတွေကို ကြားရတဲ့အချိန်မှာ ဆိုရင်.. ဆယ်တန်းအောင် အောင် ကိုယ်ကပဲ မိန်းမယူရမလိုလို၊ ကလေးပဲ ကောက်မွေးရမလိုလိုဖြစ်နေတာ။
အတွေးစကို ဖြတ်ကာ ကိုယ်ကျမည့်အခန်းကို လိုက်ရှာလိုက်သည်။ တွေ့ ပြီ.. ကျနော့်နာမည်.. အော်.. “အေ” အခန်းကိုး။ “အင်း ဘီ အတန်းပြောင်းရင်ကောင်းမလားမသိ” ၀င်လာတဲ့အတွေး...
ထိုအချိန်တွင် သူငယ်ချင်းများရောက်လာကာ .. “ဟေ့.. စိုင်းစိုင်း၊ မင်းဘယ်အခန်းလဲကွ?”
“ ဟာ.. အတော်ပဲပေါ့ဒါဆို.. ငါတို့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး အေ အခန်းအတူအတူ ကျတာပေါ့ကွာ”
“ ကိုးတန်းတုန်းက ပြောင်းပြီးပြီပဲကွာ.. ဒီတစ်ခါတော့ မပြောင်းတော့ပါဘူး။ အဲဒီ အခန်းမှာပဲ နေရအောင်ကွာ”
သူငယ်ချင်းများ၏ တိုက်သွန်းချက်နှင့် အတူ.. ကျနော်တို့ လဲ အခန်းကို ချီတက်လာလိုက်သည်။ နေရာရွေးမယ်လုပ်တော့ ခုံတိုင်း လိုလိုက ပြည့်နေပြီ။ အထူးသဖြင့် အရှေ့ ကခုံတွေပေါ့။ ကျနော်က အရှေ့ မှာ ထိုင်ရတာကို ငယ်စဉ်ကတည်းက မကြိုက်တော့ သုံးခုံမြောက သို့ သွားကာ.. ထိုင်လိုက်သည်။
ထိုနေရာတွင် ကျနော်မသိသော ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ပြတင်းပေါက်နှင့် ကပ်ရက်နေရာယူထား၏။ ကျနော်လဲ ခပ်တည်တည်ဖြင့်ပင် ..
“သူငယ်ချင်း နေရာလဲမလား?” သူ့ နာမည်က စိုင်းလုံ..နောက်မှသိတာပါ။
“ငါ ကဘယ်တန်လေ.. ငါဒီဖက်မှာထိုင်ရင်... စာရေးတဲ့အခါမှာ မင်းနဲ့ ငါတိုက်မိနေမှာပေါ့”
သူအနည်းငယ် စဉ်းစားကာ.. “ရတယ်လေ”
သို့ နှင့် ကျနော်လဲ ပြတင်းပေါက်ကပ်ရက်နေရာရသွား၏။ တစ်ခုံလျှင်နှစ်ယောက်နှုန်းဖြင့်ထိုင်ရသည်။ ကျနော်တို့ အခန်းတွင် ထိုင်ခုံ အတန်းပေါင်း လေးတန်းရှိပြီး၊ တစ်တန်းလျှင် ၉ ခုံလောက်ရှိသည်။ မိန်းကလေးက သုံးတန်းလုံးလုံးကို နေရာယူထားပြီး ယောင်္ကျားလေးများကတော့ တစ်တန်းနှင့် နှစ်ခုံသာရှိ၏။ ပြောမည်ဆိုလျှင် မိန်းကလေးက ယောင်္ကျားလေးထက် နှစ်ဆလောက် များနေလေသည်။
သို့ နှင့် ကျောင်းတက်လာသည်မှာ.. တစ်လကျော်ကျော်ရှိလာသဖြင့် အတန်းအတွင်းမှ သူငယ်ချင်းတော်တော်များနှင့် ရင်းနှီးလာသည်။ ထိုအထဲတွင်မှာ ချောမောတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကျနော်သတိထားမိသည်။
သူက ချစ်စရာလေးပါ။ ဆံပင်က ခါးထိရှည်ပြီးတော့ သူရယ်လိုက်တိုင်း.. သွားတက်လေးတွေပေါ်လာသလို ကျော့ရှင်းတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူပါ။ သူ့ နာမည်က “နံ့ သာ” တဲ့။ နာမည်နဲ့လူတော့ အလိုက်သားလို့တွေးမိပါသေးတယ်။
စာသင်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပဲရှိပေမယ့် သူနဲ့ က စကားမပြောဖြစ်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်မနိုင်တဲ့ အတန်းတွေကို ကျူရှင် ယူတဲ့အခါမှာ..သူ နဲ့ ၊ ကျနော် တစ်ချိန်ထဲမှာပါပဲ။ အစပိုင်းကတော့ စကားမပြောရဲဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲတော့မသိဘူး။ ပြောရမှာ ရှက်သလိုလို၊ ဘာလိုလို ခံစားရတယ်လေ။
သို့ နှင့် ...
ခုတော့ ကျူရှင်တက်လာတာ ၈ လလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ သူမ နဲ့စတာ၊ နောက်တာတွေ၊ ကျနော်လုပ်ခွင့်ရလာပါတယ်။ ကျနော်သူ့ ကို နောက်လိုက်တိုင်း.. “နင်နော်..တော်တော်နောက်တာပဲ” ဆိုပြီး သူမက ကျနော့်ကို ပြန်ပြောတတ်ပါတယ်။
အဲလိုနဲ့ တစ်နေ့ မှာတော့ ..အားလပ်ချိန်အတွင်းမှာ.. ကျနော့်နောက်ဘက်မှာ ထိုင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းက.. ကျနော့်နားလာထိုင်ပြီး
“စိုင်းစိုင်း..ငါ့ကို တစ်ခု ကူညီပါလား?”
“ပိုက်ဆံချေးဖို့ တော့မရှိဘူး... ဆောရီးပဲ သူငယ်ချင်း”
“မင်းကလဲ လူကို မြင်ရင်.. ပိုက်ဆံချေးမယ်လို့ ပဲ ထင်နေတာလား.? ပိုက်ဆံချေးဖို့ မဟုတ်ဘူး.. တခြားဟာကွ”
“ကဲပြောပါဗျာ.. မင်းရဲ့ တခြားဟာကဘာလဲ?”
ဗုဒ္ဓေါ.. ဟုစိတ်တွင်းတ ကာ.. ကိုယ့်ဘ၀ကို ပြန်၍စီစိမိတဲ့ကျနော့်ဘ၀.. ဟုတ်တယ်လေ.. ရည်းစားစာ ရေးခိုင်းရအောင် ကိုယ်ကပဲ အမြဲရေးနေတဲ့လူလိုလို.. ကောင်မလေးတွေနဲ့အားအားယားယားသွားနေတဲ့လူလိုလို.. သူလုပ်ပုံက..
“နေပါအုန်းကွ.. ငါ့မှာတောင် ရည်းစားမရှိတာ... မင်းကို ငါက ဘယ်လိုလုပ်ရည်းစားစာရေးပေးရမှာလဲ?”
“မင်းကြိုက်သလိုရေးကွာ.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် .. အဆင်ပြေပါတယ်”
အော်.. သူ့ အတွက်တော့ အဆင်ပြေမပေါ့. သူက ပြန်ကူးယုံပဲဟာ။ ကျနော့်မှာတော့ စိတ်ညစ်သွားတယ်လေ။ ရည်းစားရှာလို့တောင်မရတဲ့သူကိုမှ........သူက ရည်းစားစာလာရေးခိုင်းနေတယ်။ လူပျိုစာရင်းထဲဝင်သွားချင်တယ်ထင်ပါ့.။
“နေပါအုန်းကွ.. မင်းက ဘာစိတ်ကူးပေါက်လို့ ငါ့ကို လာရေးခိုင်းတာလဲ?”
ရှင်းလိုက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်.. စာရတာက စာကျက်လို့ ပဲဟာ။ ရည်းစားစာနဲ့လုံးလုံးဆို.. လုံးဝကို မဆိုင်။ ဆက်ပြောနေလျှင် ဆက်ရှည်ကာ စိတ်ပိုညစ်မှာကို မလိုလားတော့ကျနော်လဲ..
“အေး..အေး.. ငါရေးပေးပါ့မယ်ကွာ.. ဒါနဲ့ ဘယ်သူ့ ကို ပေးဖို့ လဲ?”
ပါးစပ်ဟောင်းလင်းနှင့် ကျနော်။ ကတိပေးထားပြန်လေတော့ ပိုစိတ်ညစ်သွားသည်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးအား ရည်းစားစာရေးပေးရမည်.. ကိုယ့်အတွက်တော့မဟုတ်.. သူများအကျိုးဆောင်.။
ဆက်မစဉ်းစားနေတော့.. စိတ်ညစ်ညစ်နှင့်သာ.. တစ်မျက်နှာစာရှိသော ရည်းစားစာကို ရေးပေးလိုက်သည်။ ကျနော့်ကို အရမ်းယုံသော သူငယ်ချင်းကလဲ တစ်လုံးမကျန်ပြန်ကူးကာ သူ့ လက်မှတ်ကိုထိုးပြီး ကျနော့်ကို လာပေးသည်။
“ မင်းကို စာပေးခိုင်းမလို့ ”
“မင်းဟာက မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်.. စာလဲရေးပေးရတယ်။ ပြီးရင်.. ငါကိုယ်တိုင်က ပြန်ပေးရအုန်းမယ်?”
“အေးလေ ပို့ ချင်းပို့ ....ဟိုဖက်ကမ်းကို ရောက်အောင်ပို့ ပေါ့ကွ”
ဒီစကားပုံကို ဘယ်သူကများထွင်လိုက်သည်မသိ။ ကျနော်ကတော့ ခံလိုက်ရသည်။ သို့ နှင့် ကျနော်လဲ သူများအတွက်ရေးပေးထား သောရည်းစားစာကို ကိုယ်ကြိုက်သော ကောင်မလေးကို ပေးရန်အတွက်၊ သူထိုင်သော ထိုင်ခုံသို့ လှမ်းသွားကာ။
“ရော့ နင့်အတွက် စာ”
သူမမျက်နှာလေး နည်းနည်းနီသွားသည်ကိုတော့ ကျနော်တွေ့ လိုက်သလိုလို။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်စာမှ အဲ.. ကိုယ်ရေးတဲ့စာတော့ ဟုတ်တယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်လေတော့ မသိကျိုးကျွန်ပြုကာ..
သူမက လက်လှမ်းလာပြီးနောက်၊ ခပ်ရှက်ရှက်ဖြင့်..
သူမ မျက်နှာ ခပ်တည်တည်ပြန်ဖြစ်ကာ ..
သူများအကျိုးမယုတ်အောင် လိမ်ပြောခြင်းသည်.. လိမ်ညာသည်ခြင်း မမှတ်ဆိုသော အတွေးကိုပိုက်ကာ ကျနော်လဲ.
“ဒါဆို ငါ့ကို ဖတ်ပြပါလား?”
ကိုယ်ရေးပေးသော ရည်းစားစာကို ပြန်ဖတ်ပြရအုန်းမယ်... အော်.... ဘယ်ဘ၀က ၀ဠ်ကြွေးများလဲနော်..
“ဟ.. ငါ..အဲလိုလုပ်ရင် ငါထွန်း.. ရှက်သွားမှာပေါ့။ နင့်ဖါသာနင်ပဲဖတ်”
“ဒါဆို.. ငါဖတ်မယ်.. နင်ဒီမှာ ခဏစောင့်”
သူမစာကို ဖတ်ပြီးသော အချိန်တွင် ကျနော့်ကို ပြန်ပေးကာ..
“ဒါဆို... သူ့ ကို ပြန်ပေးလိုက်”
ကြားကနေ ကိုယ်က အဟောက်ခံနေရပါလား။ ကျနော်လဲ သူငယ်ချင်းဆီပြန်သွားကာ..
“ဘာမှ.. မပြောဘူးဟေ့.. မင်းဒီလောက်သိချင်ရင် မင်းဘာသာ မင်းသွားမေးပါလားကွာ”
“ဟာ... မင်းကလဲ စိတ်ကြီးပဲ.. ခုချိန်ကစပြီး ငါ့ဖာသာ ငါလုပ်ရှားတော့မယ်.. ကျေးဇူး သူငယ်ချင်း”
“အေးပါ..အေးပါ...မင်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ငါ့ ၀ဠ်ကြွေးတွေ ခုချိန်က စပြီး.. အားလုံးကုန်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းလိုက်အုန်းမယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ... ကြွပါတော့ ဆရာရယ်.. ဟိုမှာ ဆရာမလာတော့မယ်”
နောက်ပိုင်းတွင် စာမေးပွဲနီးလာသဖြင့် ကျနော်လဲ နံ့ သာ နှင့် သိပ်စကားမပြောဖြစ်တော့ပါ။ ကျနော်သိတာကတော့ ထွန်းထွန်း အငြင်းခံလိုက်သည်ဆိုတာကိုပင်.။
ဆယ်တန်းက လူငယ်တွေအတွက် အရေးအကြီးဆုံး.. ဆယ်တန်းအောင်မှသာ ကိုယ်တက်ချင်သော တက္ကသိုလ်ကိုတက် ကိုယ်လုပ်ချင်သော အလုပ်ကို လုပ်နိုင်မည်။ ဆယ်တန်းမအောင်လျှင် ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော် စာသင်ခန်းနေခဲ့သော အချိန်အားလုံး အလကားဖြစ်ကုန်မည်။
သို့ နှင့် ဆယ်တန်းဖြေပြီ..
တခြားကျောင်းကလဲ ကျနော်တို့ ကျောင်းတွင်လာဖြေသဖြင့်.. တော်တော်လေးကို ရှုပ်ထွေးနေသည်။ နံ့ သာကိုတော့ မတွေ့ ပါ။ ကျနော်လဲ စာမေးပွဲခန်းတွင်းမ၀င်မည်.. စာကိုသာ အာရုံစူးစိုက်နေမိသည်။
သို့ နှင့် စာမေးပွဲပြီးသွားသော အခါ..
တစ်နေ့ ၌ ကျနော်သည် အလုပ်တစ်ခုဖြင့် မြို့ တွင်းရောက်ခိုက် ..တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် နံ့ သာနှင့် သွားတွေ့ လေသည်။ သူမက ပြုံးပြပြီးတော့...
“ကိစ္စရှိလို့ လာတာ။ ဘာလုပ်နေလဲ?”
“အဖေ့အတွက် မုန့် လာဝယ်ပေးတာလေ”
“နင်က ဘာလုပ်မလို့ လဲ?”
“ငါ နင့်ကို ပေးစရာရှိလို့ ”
“ဟာ..နင်ကလဲလာပါ.. အရေးကြီးလို့ ပါ”
“အမလေး.. ဘာများဒီလောက် အရေးကြီးနေတာလဲ?”
“အေးပါ..အေးပါ.. ကိုယ်တော်ရဲ့ .. လာခဲ့ပါ့မယ်”
သို့ နှင့် ကျနော်လဲ အိမ်ပြန်ကာ.. စာအုပ်နှင့် ဘောပင်ကိုထုတ်..ပြီး.. သူမနှင့် စတင်တွေ့ ရှိချိန်ကစပြီး ကျနော်ခံစားရသည်များကို သမုဒ္ဒရာအားလုံးပေါင်းကာ မှင်လုပ်၍် ရေးလျှင်ပင် သမုဒ္ဒရာသာခန်းသွားပြီး.. ရေးလို့ ကုန်မည်မဟုတ်သော ခံစားချက်များကို ရေးကာစာအိတ်တွင်းထည့်.. ခေါင်းအုန်းအောက်တွင်ထားကာ.. အိပ်မပျော်နိုင်စွာဖြင့် ... မနက်ဖြန်ဆိုတော့နေ့ ကို စောင့်စားလျှက်...
ကျနော်လဲ.. စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် သူမလာမည့်အချိန်ကို ရပ်စောင့်နေလိုက်သည်။ ဟော.. လာပါပြီ.. ကျနော့်ရဲ့အိမ်မက်နတ်သမီး။ သူမ ကျနော့်အနားကို လာကာ..
“ကဲပြောပါ ..ပေးပါရှင်.. ရှင့်ရဲ့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာ”
ကျနော်လဲ.. အိတ်ကပ်တွင်းထည့်ထားသော စာအိတ်ကိုထုတ်ကာ.. သူမကို ကမ်းပေးလိုက်သည်တွင်..
“ဒီတစ်ခါတော့ .. နင့်စာပေါ့?”
“ဟာ...နင်ကလဲ အိမ်ရောက်မှ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်လို့ ရပါတယ်။”
“ငါ့အိမ်က မသိအောင်လစ်ထွက်လာတာ.. အခု.. အိမ်မှာတော်တော်လေး အလုပ်ရှုပ်နေတယ်လေ”
“မသိပါဘူးဟာ.. ကဲသွားတော့မယ်.. နင့်စာအတွက် ကျေးဇူးပဲနော် စိုင်းစိုင်း”
“သိတယ်.. ဆရာ..မလုပ်နဲ့ ” ဟုချစ်စရာလေးပြောက သူမထွက်ခွါသွားလေသည်။
နောက်ပိုင်းရက်များတွင်.. သူမများ ကိတ်မှန့် ဆိုင်လာမလားဆိုသော အတွေးဖြင့်၊ ဆိုင်တွင်လာစောင့်နေမိသည်။ သို့ နှင့် ရက်မှ လသို့ပြောင်းကာ.. သူမကို မတွေ့ မိပါ။
အော်..ငါးလဆိုတဲ့ အချိန်ကြီးက ကျော်သွားပြီပေါ့။ သူမများ ကျနော့်ကို မကြိုက်လို့မလာတာပဲ ဖြစ်မယ်ဟု.. စဉ်းစားကာ စိတ်ညစ်နေသည့် ကျနော်သည်၊ အိမ်ရှေ့ ကုလားထိုင်တွင်ထိုင်ရင်း.. ဟိုတွေး..ဒီတွေးလုပ်နေခိုက်.. သူငယ်ချင်းများရောက်လာကာ..
“ဟာ.. စိုင်းစိုင်း.. ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွ.. ကြက်ထိုင်ထိုင်ပြီး လဒ မိုင်မိုင်နေပါလား”
အော် ရစရာ မရှိအောင်ပြောတတ်တဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ...
“မင်းတို့ ကကော ဘာကိစ္စရှိလို့ငါ့အိမ်ရောက်လာတာလဲ?”
“ရေပူစမ်းသွားရအောင် အဖော်လာညိတာ။ မင်းလဲ ပျင်းနေတယ်မဟုတ်လား.. ငါတို့ နဲ့ လိုက်ခဲ့ကွာ.. ကဲထထ”
ပါးစပ်လဲပြော လက်လဲရောက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေများ... တစ်ချို့ ကတော့ အဘွားကို သွားပြီးကျနော့်အတွက် ခွင့်သွားပန်လေရဲ့ ။ နောက်ဆုံးတော့ ကျနော်လဲ သူတို့ နဲ့ပါသွားတယ်လေ။
ရေပူစမ်းရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေက ကြက်ဥ၀ယ်ကာ.. ကျနော့်ကို သွားပြုတ်ခိုင်းသည်။ သူတို့ က တခြားသောက် စရာတွေ သွားရှာလေရဲ့ ။
ကျနော်လဲ ကြည်ဥထည့်ထားသော ဆွဲခြင်းကို ကိုင်ကာ.. ဗွက်ဗွက်ဆူနေသော အိုင်ထဲသို့ကြက်ဥပြုတ်ရန်ထည့်နေစဉ်.. နံ့ သာရဲ့အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း ဥမ္မာနှင့် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ မိလေသည်။ ကျနော့်ကို တွေ့ သည်နှင့် သူမလဲ..
“ဟဲ့ စိုင်းစိုင်း နေကောင်းလား?”
“မကောင်းဘူးဟေ့.. ဒါကြောင့် ရေပူစမ်းမှာ အခွံလာချွှတ်တာ”
“ဟားဟား... နင်ကတော့ အရင်လိုပဲ နောက်တတ်နေတာကိုး”
“မဟုတ်ပါဘူးဟယ်... ငါ့မိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းတွေလဲပါတယ်”
သူမ.. အဖြေကြောင့်ကျနော်လဲ အားတက်စွာဖြင့်...
“ဒါဆို.. နံ့ သာလဲ ပါလာတာပေါ့?”
“ဟာ... နင်မသိဘူးလား.. နံ့ သာက တခြားမြို့ ကို ပြောင်းသွားတာ ငါးလလောက်တောင်ရှိနေပြီ”
“ငါလဲ မသိဘူး.. သူ့ အဖေလာခေါ်သွားတာ.. တစ်မိသားစုလုံးပြောင်းသွားတာဟ”
“သူမသွားခင်.. နင်သူနဲ့ တွေ့ လိုက်သေးလား?”
“အေးသူမသွားခင်.. တစ်ရက်က ငါသူ့ ဆီသွားလည်သေးတယ်”
“ နံ့ သာ.. ဘာပြောသွားသေးလဲ?”
“အင်း..သူပြောတာကတော့ .. သူဒီမှာနေရတာပျော်တယ်တဲ့.. အမှန်တော့ သူမပြောင်းချင်ဘူးတဲ့.. ဒါပေမယ့် မပြောင်းလို့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်တဲ့”
“နေပါအုန်း.. နင်ကဘာသိချင်လို့ လဲ? အော်.. နင်က.. နင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးဘာပြောလဲဆိုတာကို သိချင်နေတယ်ပေါ့?”
“အမယ်..အမယ်.. ရှက်နေတယ်ပေါ့လေ.. နင့်မျက်နှာနဲ့ မလိုက်ပါဘူးကွာ”
အော်.. ကိုယ့်ကို ချွှတ်မယ့်သူတွေချည်းတိုးနေပါလားနော်...
“ပြောမှာတာ ပြောစမ်းပါကွာ.. နင်ကလဲ ပဲကိုများနေလိုက်တာ”
“အဲ... အဲလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဥမ္မာရယ်”
သူမလဲ မျက်နှာခပ်တည်တည်လုပ်ကာ...အပြုံးမဲ့၍ ခံစားနေသော မျက်နှာဖြင့်..
“သူ.. တော်တော်လေးစောင့်လိုက်ရတယ်.. မသွားခင်မှ သူရသွားတယ်။ သူတော်တော်လေး ပျော်သွားတယ်..”
“ဟာ.. ဘာလဲဟ.. နင့်စကားက”
“နင့်ဖာသာ .. နင်စဉ်းစားပေတော့.. ငါသွားတော့မယ်.. ငါ့သူငယ်ချင်းတွေခေါ်နေပြီ”
ဆိုကာ.. ဥမ္မာထွက်သွားလေသည်။ ကျနော်ကတော့ ဦးနှောက်ကို လှည့်ပတ်ကာ သူမပြောသောစကားကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်ရင်း....
အချစ်များနဲ့ရစ်ပိုင်းထားမယ်
ချစ်ခဲ့ရတဲ့ နံ့ သာလေးရယ်။
ဇနီးဆုံးသွားသဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲနေသော ယောင်္ကျားဖြစ်သူအား အခေါင်းလုပ်သူများက
အလုပ်သမား။ ။ "ဆရာရယ်သွားတဲ့သူက သွားပြီပဲ။ စိတ်ဆင်းရဲမနေပါနဲ့ ။"
ယောင်္ကျား။ ။ "အေးပါကွယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ဘာကိစ္စလဲကွယ်?"
အလုပ်သမား။ ။" ဆရာက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းတဲ့သူဆိုတော့ အခေါင်းကို မြန်မြန်ကြေမွစေမယ့် စက္ကူနဲ့ လုပ်မလား?၊ ဒါမှ မဟုတ် မြန်မြန်ကြေမွစေမယ့် သုံးပြီးသား သစ်သားတွေနဲ့ လုပ်မလား? ဆရာ"
ယောင်္ကျား။ ။ " ကျနော်က သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းတာတော့ မှန်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်မှာလဲ တစ်ခါတစ်လေ ခြွင်းချက်လေးတွေ ထားတတ်ပါတယ်။ "
အလုပ်သမား။ ။ "ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ။ ပြောသာပြောပါ.."
ယောင်္ကျား။ ။ " အေး.. ငါ့ဇနီး အခေါင်းကိုတော့.. အလွန့် အလွန်လေးပြီး.. အထဲမှာ အလုပ်သမားရှိတာတောင် မထွက်နိုင်၊ အသက်မရှူနိုင်တဲ့အခေါင်းလုပ်ပေးပါ။ "
အလုပ်သမား။ ။ " ဟုတ်ကဲ့.. ရပါတယ်"
ယောင်္ကျား။ ။ " အေးပြီးတော့ .... မြေချ ပြီးရင်လဲ အပေါ်ကနေ.. ကွန်ကရစ် သုံး၊ လေး၊ ငါးထပ် ပြန်ခင်း၊ ပြီးမှ မြေဖို့ ။ အဲဒါမှပဲ တစ်ယောက်ယောက်က ပြန်ထလာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေမရှိပဲ၊ တစ်ခုလပ် ဘ၀ကြီးကို ပျော်ပျော်ကြီးခံစားသွားရမှာ။ "
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:18 AM No comments:
ဇနီး။ ။ ခွဲစိတ်ခန်းမှ ထွက်လာသော ယောင်္ကျားဖြစ်သူအား ‘ရှင် ပြန်သတိရလာတာကို အရမ်းဝမ်းသာတာပဲ။ ရှင်မှတ်မိရဲ့ လား ? ရှင်လှေကားပေါ်ကျပြီးတော့ ခေါင်းနဲ့ ကြမ်းပြင်ရိုက်မိတယ်လေ။ အဲဒါနဲ့ဓါတ်မံရိုက်ကြည့်တော့ ရှင့်ဦးနှောက်ထဲ သွေးခဲနေတာကို တွေ့့တာနဲ့ခွဲစိတ်ကုသလိုက်တာ။
ယောင်္ကျား။ ။ အင်း... ဟုတ်လား?
ဇနီး။ ။ ဟုတ်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ခွဲစိတ်တုန်းမှာ ဆရာဝန်က မှားပြီးတော့ ရှင့်ရဲ့ ဦးနှောက်ကို သွားထိမိတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဦးနှောက်ကို အပ်ဖျား လောက်ပဲ ခိုက်မိတဲ့အတွက်သိပ်မစိုးရိမ်ရဘူးတဲ့။
ယောင်္ကျား။ ။ အော်... အင်း...ဆိုတော့...
ဇနီး။ ။ အဲလို ထိခိုက်မိတဲ့အတွက်.. ရှင့်ရဲ့ အရေးမကြီးတဲ့ တစ်ချို့ မှတ်ဥာဏ်၊ မေ့ရအလွယ်ဆုံး.. ဥပမာအားဖြင့်... မတွေ့ ရတာကြာပြီ ဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ အလုပ်က နုတ်ထွက်သွားတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်ဖော်တွေ ကို ရှင်မမှတ်မိပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့
ယောင်္ကျား။ ။ မျက်မှောင်ကျုံ့ ကာ... "ဟိုမ်း... ကျနော်အားလုံးကို မှတ်မိတယ်ဗျ.. သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ အလုပ်က လူတွေအားလုံး လိုလိုကို သိတယ်။ ဒါပေမယ့် .. ကျနော် ဘယ်လောက်ပဲ စဉ်းစား၊ စဉ်းစား၊ ခင်ဗျားဘယ်သူဆိုတာကို စဉ်းစားလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။"
Posted by Shankalay or Sai Sai at 8:56 AM No comments: